रहेनन् कलाकार आर पी भट्टराई उर्फ लाजालाम ! « Arthatantra.com
रहेनन् कलाकार आर पी भट्टराई उर्फ लाजालाम !
काठमाण्डौं । नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय कलाकार आरपी भट्टराइको निधन भएको छ । ४ दिन अगाडि उनी काठमाडौंबाट आफ्नो घर विराटनगर गएका थिए ।
बिहीबार बेलुकी फूपूको घरमा गएका आरपी बिहान मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । हाँस्य कलाकार दीपकराज गिरीले खबरको पुष्टी गर्दै भने ‘‘मलाई बिहान ८ बजे फोन आयो । बेलुकी खाना खाएर सुतेका आरपी बिहान मृत भेटिएको खबर उनको फूपूको परिवारले दिएको छ ।’ ४२ बर्षका आरपी प्रेसर र सुगर रोगबाट पीडित थिए । उनी आफ्नो मोटो शरीरका कारण चिन्तित थिए ।
पछिल्लो समय उनले अभिनय गरेको चलचित्र ‘छक्का पन्जा’ अहिले हलमा चलिरहेको छ । उनले चलचित्र ‘वडा नम्बर ६’ लगायतका केहि सफल चलचित्रमा काम गरेका छन् । हाँस्य सिरियल ‘तितो सत्य’मा काम गरेपछि उनको चर्चा चुलिएको थियो । यहि, सिरियलबाट उनलाई ‘लाजालाम’ उपनामले दर्शकले चिन्ने गर्थे ।
उनको श्रीमति र २ छोरा छन् । उनले केहि समय अगाडि आफ्नै आवाजमा एल्बम पनि सार्वजनिक गरेका थिए । उनको आवाजमा समावेश ‘कालो रैछु म पनि’ बोलको गीतको भिडियो केहि हप्ता अगाडि मात्र युटुबमा सार्वजनिक भएको थियो ।
२४ मंसिर २०७३, ११।००
प्रदेश नं ६ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, हेर्नुहोस् को–को भए मन्त्री
सुर्खेत । प्रदेश नं ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।
१० करोड कारोवार गर्दै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय कृषि मेला
काठमाडौँ । झण्डै ४३ हजार व्यक्तिले अवलोकन गर्दै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कृषि मेला राज्धानीको भृकुटीमण्डपमा आज
श्रेष्ठ जापानको राजधानी टोकियोका लागि अवैतनिक वाणिज्य दूत नियुक्त
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जापानको राजधानी टोकियोका लागि बलराम श्रेष्ठलाई अवैतनिक वाणिज्य दूत
यसरी टुंगियो प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच वान टु वान वार्ता
भक्तपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का
मिस ईकलेज २०१८ को ताज काजल तामाङले पहिरिन
नगरपालिकाले दियो दुई सय पचास विद्यार्थीलाई विद्यालय जान निःशुल्क साइकल
काठमाडौं । सिजन मिडियाले राजधानीको अक्षरा स्कुल काडाघारीमा शनिबार आयोजना गरेको ‘मिस ईकलेज २०१८’ मा